अण्डा कति खानुहुन्छ,कतै धेरै अण्डा खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग र असामयिक मृत्यु त निम्तिरहेको छैन ? | Diyopost
अण्डा कति खानुहुन्छ,कतै धेरै अण्डा खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग र असामयिक मृत्यु त निम्तिरहेको छैन ?
पुराना अध्ययनहरूले अण्डा खानु र मुटुरोगको सम्बन्ध नरहेको देखाएकोमा नयाँ अध्ययन विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ।
“हप्तामा तीनदेखि चारवटा अण्डा खानु ठिकै हुन्छ,” ब्रिटिश विज्ञले थपे। विविसीबाट.